BBQ – Warmae.com
, article, Bar & Grill, BBQ
ကပ်ရောဂါအခြေနေက မပြီးသေးဘူးဆိုပေမယ့် အရင်နီးပါးလောက် စားသောက်ဆိုင်တော်တော်များများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေကြပြီဖြစ်သလို ဆိုင်အသစ်တွေလည်းဖွင့်လာကြပါပြီ။ ဒီတစ်ပတ်အတွက်သွားစရာ ဆိုင်အသစ်လေးတွေအကြောင်းကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ချင်းရိုးရာအစားအသောက်တွေရောင်းချမယ့်ဆိုင်လေးပါ။ အသစ်ဖွင့်ထားတဲ့ဒီဆိုင်လေးက အပြင်အဆင်လေးကချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးရာစားအသောက်အသစ်အဆန်းတွေစားကြည့်ချင်တဲ့သူတွေသွားရမယ့်ဆိုင်လေးပါ။
ကော်ဖီကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ချင်းတောင်ကော်ဖီသောက်လို့ရမှာပါ။ ချင်းရိုးရာအစားအသောက်တွေကိုသေသေချာချာမစားဖူးလို့ အရောက်သွားဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့နေရာလေးပါ။
U Yae Khel Street, Mayangone Township
09 976 182177
ဒီဆိုင်လေးက နာမည်အတိုင်းပဲ Bread အစုံအလင်နဲ့ ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း အေးဆေးအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ ဆိုင်နေရာက အလုံကရင်ခြံဝင်း အ.ထ.က ၂ အလုံကျောင်းနားလေးဆိုတော့ လူတွေ ကားတွေရှင်းတဲ့နေရာလေးလို့ဆိုနိုင်တယ်။ အပြင်အဆင်လေးက သွားချင်စရာကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါ။
09 892 892020
လတ်တလော ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးရယ်လို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ဆိုင်နာမည်လေးကလည်း ထိုင်ချင်စရာလေး။ ဒီနေရာလေးက တခြားဘီယာဆိုင်တွေလိုမဟုတ်ပဲမတူညီတဲ့ခံစားမှုကိုရစေနိုင်မယ်လို့ မြင်မိတယ်။ အသစ်အဆန်းလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင်တော့ သွားကြည့်ရမယ့်နေရာလေးတစ်ခုပေါ့။
– 09 662 601717
Beerlogy Bar, BBQ and Rstaurant
July လအတွင်းကစပြီး ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ပါ။ ဘီယာကိုမှသောက်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေစေရမယ့်နေရာလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဆိုင်ပုံစံကြည့်ရတာတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ သွားချင်စရာပုံစံလေးပါ။ဆိုင်ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဇူလိုင်လ (၁၀) ရက်နေ့အထိ စားစရာရော၊ သောက်စရာအားလုံးကို 20% off ရှိပါတယ်တဲ့။ ဆရာစံလမ်းမှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့ သွားရလာရတာလည်း အတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးပါ။
– No.26, Sayarsan Street, Bahan Township, Yangon.
09 889 664488
ရန်ကုန်မြို့မှာ အမြည်းကောင်းကောင်းနဲ့ ဘီယာအမျိုးစားစုံစုံလင်လင်သောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တောင်ဥက္ကလာ၊ ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းက Cozy Bar & Restaurant ကိုသွားဖို့ လမ်းညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။
အမြည်းဆန်းဆန်းတွေကြောင့် လူတိုင်းရဲ့ပါးစပ်ဖျားမှာ နေရာတစ်နေရာအခိုင်အမာရထားတဲ့ဆိုင်မှာ ကယားဝက်အူချောင်း၊ ဆိတ်ဗယာကြော်၊ ပင်လယ်စာဟော့ပလိတ်၊ ကြက်အရေခွံအစာသွပ်၊ ဆတ်ကချင်ထောင်း စတာတွေက လူကြိုက်အများဆုံးနာမည်ကြီး Menu တွေပါ။
အရင်ဆုံး ဘီယာနဲ့စသောက်မယ်ဆိုရင် ဆိတ်ဗယာကြော်ကို မဖြစ်မနေ မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ အရသာထူးထူးလေးနဲ့ စားရတာနည်းနည်းလေး စပ်သယောင်ယောင်ရှိပေမယ့် အစပ်မစားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အစပ်လျှော့ပေးဖို့ ပြောလိုက်ပါ။ အချဉ်နဲ့တို့စားရင် အရသာတစ်မျိုးပြောင်းပြီး ဘီယာနဲ့တကယ်လိုက်ဖက်မှုရှိပါတယ်။
ပင်လယ်စာဟော့ပလိပ်ကတော့ အငွေ့တထောင်းထောင်းနဲ့ ပူပူလေးစားရင်တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ပင်လယ်စာကို အရသာထူးထူးနဲ့ ပုံစံကွဲကွဲစားချင်တယ်ဆိုရင် စားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပူတုန်းမှာစားဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ အေးသွားရင်စားရတာ အရသာပေါ့သွားတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
ဆတ်ကချင်ထောင်းကတော့ ရိုးရိုးပုံမှန်စားနေကျ ဆတ်သားခြောက်တွေလိုအရသာမျိုးရှိပါတယ်။ သူ့မှာမတူညီတဲ့အချက်က ဆတ်သားခြောက်လို အားအင်စိုက်ပြီး ဝါးနေစရာမလိုပဲ နူးညံ့မှုရှိပါတယ်။ ချိုအီတဲ့အရသာမျိုးအတွက် ထူးထူးခြားခြား ရွှေအိုရောင်သံယောစဉ် ဆိုတဲ့ ပင်လယ်စာဟင်းပွဲလေးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရထားတဲ့ဟင်းပွဲတစ်ခုဆိုတော့ အရသာကတော့ အားလုံးသဘောကျနိုင်မှာပါ။
No-668 , 4/6 Bya Ma Soe Street , Southokkalapa Tsp, Yangon,
Phone : 01 577 979
Mya Nandar – Thai Food & BBQ
, article, BBQ, Thai, Warmae Review
ထိုင်းအစားအစာအရသာကောင်းကောင်းနဲ့ စားလို့ရမယ့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်း ဒီတစ်ပတ်ဖောက်သည်ချပါမယ်။ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ နာမည်ကြီး လူသိများတဲ့ ထိုင်းဆိုင်တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ မြနန္ဒာ Thai Food and BBQ ဆိုင်ပါ။
ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ထိုင်းအရသာအစားအစာတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကအဆင်ပြေပါတယ်။ ထိုင်းအစားအသောက် အထောင်းမျိုးစုံနဲ့အကင်စုံ ရပါတယ်။
ပင်လယ်စာအစားအသောက်တော်တော်များများရတာကိုတွေ့ရတယ်။ အသားလတ်ပြီး စားလို့အဆင်ပြေတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်စားဖြစ်တဲ့ ငါးဆားကြမ်းကင်အကြောင်းစပြောရရင် နာမည်ကိုကြည့်ပြီး အတော်လေးငံမယ်လို့ထင်ခဲ့တာ။ တကယ်တမ်းစားကြည့်လိုက်မှ အရသာထူးပြီး ငါးသိပ်မကြိုက်တဲ့ အက်ဒမင်တောင် သဘောကျမိတယ်။ တခြားငါးကင်တွေလို အသားထဲမှာ ဘာအနှစ် အဆာမှမထည့်ထားပဲ အသားချည်းသီးသန့်ကို အရသာတစ်မျိုးလေးနဲ့ စားရတာမို့ အရသာတွေ့မိတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဆိုင်လာတဲ့သူအများစု မှာစားကြလေ့ရှိတဲ့ တောထောင်းပါ။ ဟင်းပွဲအပြင်အဆင်က စားချင့်စဖွယ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်လေးထည့်ထားတဲ့အထောင်းတစ်မျိုးပါ။ သင်္ဘောသီးထောင်းကိုတွဲဖက်စားစရာ အစုံအလင်နဲ့စားချင်စဖွယ်လေး ပြင်ဆင်ထားတာကို သဘောကျမိတယ်။ တစ်ပွဲကို ၂ ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်။
နောက်ထပ်စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပန်းဂဏန်းထောင်းကတော့ ဂဏန်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်မယ့် ဟင်းပွဲတစ်ခုပါ။ဂဏန်းသိပ်စားလေ့မရှိတဲ့သူမို့ထင်တယ် အရမ်းတော့မကြိုက်ဘူး။ အသားအရသာမဆိုးဘူးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ဂဏန်းကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ သဘောကျမှာပါ။
ဒီဆိုင်ကိုရောက်ရင် အခြားဆိုင်တွေမှာလိုမဟုတ်ပဲ ထူးထူးခြားခြားအစားအသောက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ပင်လယ်စာ သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ငါးခူမွှကြော် သင်္ဘောသီးထောင်း၊ ဘာကူတေး၊ ပင်လယ်စာအစုံသုပ်တို့လို အစားအသောက်တွေက မစားဖူးသေးရင် မြည်းကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဟင်းပွဲတွေပါ။
ဆိုင်မှာ ထိုင်းအစားစာတွေအပြင် အကင်အစုံနဲ့ ဘီယာတွေရပြီး အမြည်းကောင်းကောင်းစားပြီး သောက်မယ့်ဘော်ဒါတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ဆိုင်မှာ ကားပါကင်နေရာကျယ်ပြီး ကားပါကင်အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီဆိုင်အကြောင်းကို မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းစာကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကိုသွားကြည့်ဖို့ လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
No. 4, Thanthumar Road, Su Paung Bus Stop,Yangon.
Phone : 09 781 889035
Best Japanese Restaurants in Yangon
, article, BBQ, Japanse, seafood, Warmae Review
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်များ
တကူးတကသွားနေဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ ရန်ကုန်မှာလည်း ဂျပန်အစားအသောက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာ ရနေပါပြီ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ရန်ကုန်မြို့က ဂျပန်ရိုးရာအစားအသောက်တွေကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအကြောင်းကို စုစည်းဖော်ပြပေးသွားပါမယ်။ ဒီစားသောက်ဆိုင်တွေက Warmae အဖွဲ့သားတွေရှာဖွေထားသလောက်ကိုပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
Shiki Tei Restaurant
PARKROYAL Yangon ပထမထပ်မှာရှိတဲ့ Shiki Tei Restaurant မှာ ဂျပန်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းတွေရှိပါတယ်။ ဂျပန်စားဖိုမှူးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ဂျပန်အစားအစာတွေကြောင့် လူကြိုက်များတဲ့ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါ။ ဆူရှီကောင်းကောင်း ဒါမဟုတ် Ramen ကောင်းကောင်းတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Fuji Japanese Restaurant – Myanmar
အမာခံပရိသတ်အများကြီးရှိတဲ့ ဒီဆိုင်ကလည်း ရန်ကုန်ရဲ့ နာမည်ကျော် ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ခွဲတော်တော်များများရှိပြီး ဂျပန်စာကြိုက်သူတွေသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက် Fuji Japanese Restaurant ကအဆင်ပြေစေမှာပါ။
1. Hantharwaddy Rd.
3. Mingalar Mandalay
4. Junction City, L3
Family Sushi Japanese Restaurant
ဆူရှီဈေးတန်တန်နဲ့ကောင်းကောင်းလေးစားချင်တဲ့သူတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ဆိုင်လေးပါ။ Salmon Maki ၊ Tamago Nigiri၊ Salmon Nigiri စတဲ့ဆူရှီအမျိုးအစားပေါင်းများစွာကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့စားနိုင်လို့ လူကြိုက်များတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ စားကောင်းတဲ့ ဂျပန်အစားအသောက်အစုံရတဲ့ ဒီဆိုင်လေးကိုလည်း ဂျပန်အစားအစာချစ်သူတွေအကြိုက်တွေ့နိုင်မှာပါ။
104,U Chit Maung Housing, U Chit Maung St,Yangon.
09 507 7223
ဆူရှီမှ ဆူရှီပဲဆိုရင်တော့ ဒီဆိုင်လေးကိုသွားဖို့လိုပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာ ဂျပန်ဆူရှီအရသာများစွာရှိပြီး ဂျပန်အစားအစာကောင်းကောင်းလေးတွေလည်း ရရှိနိုင်မယ့် ဆိုင်လေးပါ။
Shwe Taung Tan Street,Yangon .
09 260 111 565
Chatrium Hotel Royal Lake Yangon က Kohaku Japanese Restaurant မှာ တော့ အသား၊ ငါး အသီးအရွက်တွေကိုဂျပန်ရိုးရာအတိုင်းချက်ပြုတ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ မကြာခဏလည်း ဂျပန်အစားအသောက်တွေအတွက်ဘူဖေးအစီအစဉ်တွေလည်း ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
No 40 Natmauk Road, Tamwe Township,Yangon .
Michinoku Japanese Restaurant က ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ပုံစံလေးနဲ့ ဂျပန်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းတွေရတဲ့ဆိုင်တစ်ခုပါ။ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်နဲ့ ဆရာစံလမ်းထောင့်မှာရှိတဲ့ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ကလည်း ဂျပန်လူမျိုးအများစုသဘောကျနှစ်ခြိုက်တဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပါ။
Corner of New University Avenue Road and Sayasan Road, Bahan Township,Yangon.
09 787 400725
ဈေးနှုန်းသင့်တင့်တဲ့ ဂျပန်အစားအစာများနဲ့ Japanese Ramen ကို အဓိကထားရောင်းချတဲ့ Jan Jan Jan Japanese Ramen ဆိုင်က ဆိုင်ခွဲ ၂ ခုရှိပြီး Ramen ကြိုက်သူတွေအတွက် ဦးစားပေးသွားရမယ့် စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုပါ။
– 3rd floor, Myanmar Plaza.
– No (211), Corner of Anawtatha Road and 12th Street, Lanmadaw, Yangon.
09 44930 6306
KOBE-YA Japanese BBQ restaurant
ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေအများစု အားပေးကြတဲ့ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါ။ ဒီဆိုင်မှာဂျပန်ရိုးရာပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်ထားတဲ့ BBQ ကောင်းကောင်းတွေရပါတယ်။
No.4, Pyi Thar Yar street, Moe Kaung Road,Yangon.
09 42001 5401
ဆူရှီကောင်းကောင်းနဲ့ ဂျပန်စာဆန်းဆန်းလေးတွေကို သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့စားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီဆိုင်လေးက သင့်တော်ပါတယ်။ မြို့ထဲကိုရောက်လို့ ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်ရှာမယ်ဆိုရင် Hanabi ကိုရွေးသင့်ပါတယ်။
No.238, Maha Bandula Park Street(Upper), Kyauktada Township, Yangon.
01 373 414
မန္တလေးကဘော်ဒါတွေ စားရင်း သောက်ရင်း ဘောလုံးပွဲကြည့်နိုင်မယ့်ဆိုင်
ဒီတစ်ခေါက် မန္တလေးကိုရောက်တုန်း ထိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်အကြောင်းကို ဘော်ဒါတွေအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်က ဘောလုံးပွဲဝါသနာရှင်တွေအတွက် လုံးဝသဘောကျမယ့်ဆိုင်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။
ဘောလုံးပွဲရှိတဲ့ညတွေမှာ ဆိုင်မှာ ပရိုဂျက်တာအကြီးနဲ့ ပြတာကို အတော်လေးသဘောကျမိတယ်။ တစ်ဝိုင်းနဲ့တစ်ဝိုင်း အရမ်းကပ်နေတာမဟုတ်လို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်အားပေးနိုင်တယ်။
ဆိုင်က ခြံဝန်းထဲမှာရှိပြီး ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းရှိတာကြောင့် သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ ဆိုင်မှာ ပင်လယ်စာ နဲ့ပတ်သက်ရင်လူကြိုက်များတဲ့ ပင်လယ်စာဗန်းနဲ့ရေဘဝဲသုပ်၊ အကင်မျိုးစုံရှိလို့ အမြည်းအတွက် လုံး၀ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒီဆိုင်မှာသဘောအကျဆုံးက အပြင်ကပုလင်းယူလာမယ်ဆိုရင်တောင် Charge မကောက်တာကိုပါပဲ။
ဆိုင်မှာ မိန်းကလေးတွေအကြိုက် ပင်လယ်စာသင်္ဘောသီးထောင်း၊ ပင်လယ်စာရခိုင်သုပ်တို့လိုချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အစားအသောက်တွေအပြင် အကင်အမျိုးအစားစုံတာရယ်၊ ထိုင်လို့ကောင်းတာရယ်ကြောင့် ဒီဆိုင်လေးကို သဘောကျမိတယ်။
မွေးနေ့ပွဲပဲလုပ်လုပ် Gathering ပဲလုပ်လုပ် ဒီဆိုင်က ခြံဝန်းထဲမှာရှိတာကြောင့် private ဆန်တဲ့ အရသာကို ရနိုင်ပါတယ်။ ကဲ … အကြိတ်အနယ်ရှိတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကြည့်ရင်း အရသာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေစားရင်း သောက်မယ် စားမယ်ဆိုတဲ့ ဘော်ဒါတွေအတွက် ဆိုင်ကောင်းလေးတစ်ဆိုင်ကို လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …
N0 (12/ KaKa-4), 57th street, Thatepan Street (South), Kantharyar Ward, Chanmyatharzi, Mandalay.
Phone : 09 799176296